အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: 01/01/08
ကျွန်တော်။ ။ ကိုယ့်ကို “အိပ်မက်” တစ်ပွဲပေးကွာ ညီလေး… “မျှော်လင့်ချက်” များများထည့်… “အတိတ်ဆိုး” တွေမထည့်နဲ့… “အနာဂတ်” ရွှဲရွှဲလေးစမ်းကွာ… “ခံစားချက်” ကိုထည့်ရင် ဒီအတိုင်း မထဲ့နဲ့ ကပ်ကြေး လေးနဲ့ ညှပ်ပြီးထည့်… အဲမေ့လို့… မင်းတို့ဆိုင်မှာ ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ “ဘ၀” ကို နဲနဲလေး ပါးပါးလှီးပြီးထည့်ကွာ…။ ဘ၀ ဆိုတာက ပါးပါးလှီးထားမှ ကောင်းတာ…အတုံးလိုက် အတစ်လိုက်ဆို သိပ်မကောင်းဖူး လူကို ဒုက္ခ ပေးတတ်တယ် ။
ကောင်လေး။ ။ ဟုတ်ကဲ့အစ်ကို…အော်…ဒါနဲ့… “မျက်ရည်” ထည့်အုံးမလား အစ်ကို??
ကောင်လေး။ ။ ဘာသောက်အုံးမလဲ အစ်ကို…. “ဖြစ်ချင်တာလား”… “ဖြစ်သင့်တာလား”…???
ကျွန်တော်။ ။ ကိုယ်ကတော့ “ဖြစ်သင့်တာ” သောက်နေကျကွ… ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခါတော့ အပြောင်းအလဲလေး ဖြစ်အောင် “ဖြစ်ချင်တာ” တစ်ခွက်ပေးကွာ… “နောင်တ”တော့ လျော့ထည့်ကွာ ညီလေး… ငါ့ဘ၀မှာ“ဖြစ်သင့်တာတွေ” ချည်းသောက် နေရတာ ကြာတော့လည်း စိတ်ကုန်လာပြီ....။
ဒီလိုနဲ့ပဲ… ကျွန်တော့်ရဲ့ နံနက်စာကို “မျက်ရည်နဲနဲပါတဲ့ အိပ်မက်တစ်ပွဲ”….“နောင်တနဲနဲ လျော့ထည့်ထားတဲ့ ဖြစ်ချင်တာတစ်ခွက်” နဲ့ ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်....။ ။
Posted by Pyiet Oo Aung at 8:37 PM 16 comments:
နှစ်သစ်ကူးညနှင့် ဂစ်တာတစ်လက်ရဲ့ ရင်ခုန်သံ
မျက်ဝန်းတစ်စုံကို ဖြေးဖြေးလေး မှိတ်ပြီး
ငါ့နှလုံးသွေးကြောတွေကို အဆက်မပြတ် တီးခတ်….
ငါပဲအလှဆုံး ငိုကြွေးပေးလိုက်ပါတော့မယ်….။ ။
Posted by Pyiet Oo Aung at 1:45 AM2comments:
ရှိခြင်း၊ မရှိခြင်းနဲ့ New Year Night
၇ နှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့ အထီးကျန်မှုရှိတယ်…..။
New Year Night မရှိဖူး….။
Posted by Pyiet Oo Aung at 1:41 AM 1 comment: